June 2008 ~ အောင်ဝေး
(မူရင်း Freedom Fighter for Burma ဘလော့ဂ်၊ နေနတ်ရှင်ဘလော့)
‘‘မပ ပြီးရင်မက ပေါ့’’
(မေ ၁၀ တော်လှန်ရေးသို့ )
(မူရင်း - Freedom Fighter for Burma ဘလော့ဂ် )
‘မော်’ နဲ့ ‘ချု’ တို့ 
‘‘အေ’’ နဲ့‘‘ဇော်’’ တို့ 
အေသင်နှင့် ဇော်မင်းထွေးသို့ )
(မူရင်း - Freedom Fighter for Burma )
ဒါ ... နောက်ဆုံး အခေါက်ပဲနော်
ကိုင်း ... နားလိုက်ကြဦးစို့ရဲ့
ဗန်ဂိုး ရေ ...
(မူရင်း - Heaven of DEVIL ဘလော့ဂ် )
(မူရင်း - ညိမ်းညိုဘလော့ဂ် )
ပြတင်းပေါက် တစ်ခုလုံး ၀ါထိန်သွားရော ၊
ဟယ်လင် မင်းသမီးတွေချည်း ပါသွားသလို
အမေ စိုက်ခဲ့တယ်လေ…..။ ။
(မူရင်း - ကာရန်လေး “ကာရန်မဲ့နေရာ” ဘလော့ဂ် )
1.Heroine behind bars
2.“Aung San Suu Kyi”, she – the red star.
3.Red star over Irrawaddy
4.“Aung San Suu Kyi”, she – the tragedy.
5.Tragedy in the dark
6.“Aung San Suu Kyi”, she – the sword.
7.Sword made of roses
8.“Aung San Suu Kyi”, she – the goddess.
9.Goddess of democracy
10.“Aung San Suu Kyi”, she – the strategy.
11.Strategy against junta
12.“Aung San Suu Kyi”, she – our freedom mother.
(Dedicated to Daw Aung San Suu Kyi's 12 years incarceration)
(မူရင်း - ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ် )
poem, Writings in English | No comments |
(ဓာတ်ပုံ - Tharaphi's photostream )
photo, poem | No comments |
ကွန်ဒုံးစွပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ ။
(မူရင်း - ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ် ၊ ကိုမိုးသီးဘလော့ဂ် )
လိုအပ်မှုကို သဘောပေါက် နားလည်ခြင်းပဲ။
၁၉၆၂ မှာ ရေတိမ်နစ်ခဲ့ရတယ် …။
ဆက်လက် စီးဆင်းခဲ့ပြီ …။
ကဗျာပဲပေါ့ သား …။
ဖြစ်ပါစေသတည်း …။ ။
(မူရင်း - ခေတ်ပြိုင်၊ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့ဂ် )
After the violence,
I make my way into non-violence.
After the crack-down,
I am on my way to liberated area now.
In the recent old darkness,
I hid my soul under the bloodshed.
During the wartime like days,
I fled from my bomb-shelters away.
Oh! My lover, I was being peeped and sniped.
Oh! My lover, I was being preyed and hunted.
But, our sanghas, they save me.
But, our students, they help me.
But, our people, they guard me.
But, our friends, they love me.
Now here, crossing the bridge of the trouble
Freedom fighters, Democracy lovers embrace me well.
Now here, according to the freedom, justice and peace
I amafree man indeed.
Now here, among the white doves
My dream will come true first.
Now here, under our dramatic revolution flags
Let's take our breaths and ―
Let's march on ahead.
(မူရင်း - ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့ဂ် )
poem, Writings in English | 1 comment |
(မူရင်း - သူမ၏ကဗျာဆရာ၊ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့ဂ်များ)
(မူရင်း - ယုန်ကလေး ဘလော့ဂ် )
Oh! my soldier brother,
If you wereagood soldier,
A soldier is notasoldier ―
If you wereapatriotic soldier,
A soldier may be ―
If you wereademocratic soldier,
A soldier means ―
notabutcher,
Including you ―
We, the freedom fighters
We, the democracy lovers
We, the peace makers
Let's join hands to buildagovernment ―
Oh! my soldier brother(s)
Urgently, you find your way to ―
(son ofaveteran)
အောင်ဝေး (စစ်သားဟောင်းကြီး တဦးရဲ့ သား)
(မူရင်း - အင်ဒမန်ဟီးရိုး၊ နစ်နေမန်း၊ ကိုနစ်နေမန်း တို့၏ ဘလော့ဂ်များ )
ဒီကဗျာကို အောင်ဝေးက ရေးစပ်ခဲ့ပြီးတော့ အောင်ဝေးနဲ့ ရွန်းစိမ့်စိမ့် လမင်းဝေး တို့က ရွတ်ဆိုခဲ့တာပါ။
HIV မိဘမဲ့ ဝေဒနာသည် ၁၃ ယောက်ကို စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းက သုခရိပ်မြုံ ဂေဟာအတွက် မန္တလေးမှာ အလှုသွားခံစဉ်က ကျပ်သိန်းတစ်ရာကျော် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးမှာ ကဗျာရွတ်ပွဲ ကျင်းပခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဆရာအောင်ဝေးက ဒီကဗျာလေးကို မန္တလေးကို အကြွေးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ ရွှတ်ဆို ခဲ့တာပါ။
လူတွေက ဂလိုဘယ်တော့ ဆန်ချင်တယ်
လူတွေက မုန့်လုံးတော့ စက္ကူကပ်ချင်တယ်
လူတွေက ဂျင်ဆန်းမီနဲ့တော့ လမ်းလျှေက်ချင်တယ်
* Rainbows are multi-coloured.
Our Performanace is no divided by colours,
That's why we call it " White Raibow "
မိဘမေတ္တာ ငတ်နေတဲ့ ကလေးတွေပေါ့
အကြင်နာ ကရုဏာ လိုအပ်နေတဲ့ ကလေးတွေပေါ့
ကမ္ဘာကြီးက လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း သွားဖို့ပြောနေတယ်
ကမ္ဘာကြီးက ဘော့လုံးပွဲကြည့်ပြီး ငြိမ့်နေတယ်
ကလေးတွေခမျာ ချောက်အိမ်မက်ထဲ ကျနေရပြီ
ကမ္ဘာကြီးက AIDS တိုက်ဖျက်ရေး ဆွေးနွေးနေတယ်
ကလေးတွေခမျာ HIV ပိုးကူးစက်ခံနေရပြီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်ရှင်ခြင်းကို ဖဲ့ဝေပေးရမယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို မျှဝေပေးရမယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညတွေကို လုံခြုံပေးရမယ်
(မူရင်း - အဖြူရောင်သက်တံဘလော့ဂ် )
စိတ်ကို ပန်းချီကားထဲ ထည့်ထားတာပါ။
စိတ်ကို ပန်းချီကားထဲ ထည့်ထားခဲ့တာပါ။
စိတ်က ပန်းချီကားထဲက ထွက်ပြေးသွားတယ်လေ။
လှောင်ပိတ်ထားလို့ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ။
(ပိပိသို့ . . .)
(၂၀၀၇-ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် - ရတီမဂ္ဂဇင်း)
(မူရင်း - ကဗျာသီတဲ့ကြိုး ဘလော့ဂ် )
‘ချဟ … ချဟ’ လို့
‘အင်္ဂလိပ်အခက်၊ ဗမာ့အချက်’ တဲ့
နအဖအခက် ပြည်သူ့အချက် ပေါ့
ကလေကချေ ပလိပ် သန်းရွှေ
လက်ကိုင်တုတ် စစ်သားနဲ့ ရဲ
ပြည်သူလည်း ရိုက်လို့ သေရမယ်။
ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။ ။
(မူရင်း - ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ၊ SnowyLovelyPoem တို့၏ဘလော့ဂ်များ)
ဘယ့်နှယ့်၊ ညရဲ့အရည်တွေ တရွှဲ ရွှဲ
စိုစို စိမ်းစိမ်း မြင်ရတယ်
တောအုပ်ကလေး ခြုံခြုံ ပြီး
နွေဦးရယ် ရှင်ကွဲ မကွဲပါရစေနဲ့ ၊ ယုံနော် ။ ။
(မူရင်း - စပ်မိစပ်ရာဘလော့ဂ်)
နှင်း ဆီ က နီ ဆဲ
အ ၀ါ ရောင် အ ခန်း ကျဉ်း ထဲ
ဧ ရာ လည်း စီး မြဲ ။ ။
(မူရင်း - ဟစ်တိုင် )
သင် … သင့်ချစ်သူ၏ အမည်နာမကို
လှပစွာ ရွတ်ဆို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတော့ … ။ ။
(မူရင်း - ဒေါင်းအိုးဝေ စာစောင်၊ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ်)
ငှက်... မြေကြီးကို ဘယ်သူဖွင့်ကြည့်ရဲသလဲ... ငှက်
ငှက်... ငါသည် အာလဖဖြစ်၍ ငါသည် သြမေဂလည်း ဖြစ်သည် တဲ့... ငှက်
ငှက်... အိမ်မက်ထဲ၌ အသက်ရှင်သူ အိပ်မက်၌ပင် အသက်စွန့်၏... ငှက်
ငှက်... သားကောင်ရဲ့နောက်သို့ မုဆိုးသည် ထက်ကြပ်လိုက်သကဲ့သို့... ငှက်
ငှက်... သေခြင်းတရားသည် ရှင်ခြင်း၏ နောက်ပါးက လိုက်နေဆဲ... ငှက်
ငှက်... ကောင်းကင်က တဖြည်းဖြည်း နိမ့်နိမ့်လာပြီ... ငှက်
ငှက်... နွေဦး ကောက်ရိတ်ပွဲတော်က ရောက်မလာသေး ... ငှက်
ငှက်... ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် ကတာ ယဉ်ရဲ့လား မမေးနဲ့... ငှက်
ငှက်... ဓားတို့ရဲ့အောက်က ကမ္ဘာမြေ သတိရပစေ... ငှက်
ငှက်... နှောင်ကြိုးမှအပ ဆုံးရှုံးစရာ အခြားဘာမှမရှိ... ငှက်
ငှက်... သည်လိုပုံနှင့် မိုးကြီးချုပ်လျှင်... ငှက်
ငှက်... ကျွန်ုပ် အိမ်ပြန်ရောက်မည် မဟုတ်ပါ... ငှက်
ငှက်... ကမ္ဘာကြီးက လက်တွန်းလှည်းကလေးတွန်းပြီး ... ငှက်
ငှက်... ငရဲပြည်သွား တောလားက မဆုံးသေးဘူးလား ... ငှက်
ငှက်... ဒွေး သေသွားပြီ... ငှက်
ငှက်... ဒွေး မသေသေးဘူး ... ငှက်
ငှက်... နွားရိုင်းသွင်းချိန် လွန်သွားပြီ... ငှက်
ငှက်... ကမ္ဘာပေါ်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ရှိပါစေသတည်း... ငှက်
ငှက်... မနက်ဖြန် အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ တွေ့မယ်... ငှက်
ငှက်... ဓနိတန်းထိပ်က ကောင်မလေးလည်း လင်ရသွားပြီ... ငှက်
ငှက်... ဒေါနတောင်တန်းကြီးက မေးနေတယ်... ငှက်
ငှက်... သောင်ရင်းမြစ်ကို သွားငေးရဦးမယ်... ငှက်
ငှက်... ဒီနေ့ လိုနေတာက... ငှက်
ငှက်... ထရမ်းပက်တစ်ထောင် ပြိုင်တူမှုတ်ဖို့ပဲ... ငှက်
ငှက်... တစ်ပွင့်ကြွေရင် နှစ်ပွင့်ဝေမယ်... ငှက်
ငှက်... ကြွေခြင်းဆိုတာ ပွင့်ခြင်းပဲ... ငှက်
ငှက်... ဗဟုဝါဒဆိုတာ... ငှက်
ငှက်... ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် လုပ်တာပါပဲ... ငှက်
ငှက်... လေနုအေးက တနွဲ့နွဲ့နော့နေဆဲ... ငှက်
ငှက်... အကောင်းကို ရှာ၏... ငှက်
ငှက်... အကောင်းကား မရှိ... ငှက်
ငှက်... တံတားအောက်မှာ မြစ်ရေတွေ စီးဆင်းသွားကြပြီ... ငှက်
ငှက်... အသက်တစ်ရာ မနေရပေမဲ့... ငှက်
ငှက်... အမှုတစ်ခုမှ မတွေ့ရင် အကောင်းဆုံး ... ငှက်
ငှက်... ဒီအကြောင်းတွေကို... ငှက်
ငှက်... မိုးရွာထဲမှာ ထီးဆောင်းပြီးပြော... ငှက်
ငှက်... တင်ဇာဝင်းပြည့်လည်း ကလေးတစ်ယောက်ရပြီ... ငှက်
ငှက်... ပုသိမ်မှာ ကော်ရည်သွားသောက်ရအောင်... ငှက်
ငှက်... အစ်မ ခင်ပန်နှင်းကလည်း ငိုငိုနေတယ်... ငှက်
ငှက်... ပိုင်သနဲ့ တွေ့သေးလား ... ငှက်
ငှက်... ဆော့ခရတ္တိက မသေခင် အကြွေးဆပ်ခဲ့တယ်... ငှက်
ငှက်... သမိုင်းကြွေးကို ဘယ်လိုဆပ်မလဲ... ငှက်
ငှက်... ပျက်စီးတယ်ဆိုတာ ဖျက်ဆီးခံရလို့ပဲ... ငှက်
ငှက်... ရုပ်ရှင်ရိုက်မလား ... ငှက်
ငှက်... တောင်ကိုရီးယား ဓားစာခံတွေ အမြန်လွတ်ပါစေ... ငှက်
ငှက်... အီရတ်က ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘဲ... ငှက်
ငှက်... အာရှဖလားရသွားတယ်... ငှက်
ငှက်... ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း ဂန္ဒီကို ကြိုက်တယ်... ငှက်
ငှက်... ကြီးလာတော့လည်း ဂန္ဒီကို ကြိုက်ဆဲ... ငှက်
ငှက်... မွန်ရိုးကို သတိမရဘူးလား ... ငှက်
ငှက်... သေနင်္ဂဗျူဟာ အနိုင်တိုက်ဖို့... ငှက်
ငှက်... တစ်ခါတစ်ရံ နည်းပရိယာယ်ရေး အရှုံးပေးရတယ်... ငှက်
ငှက်... ကြွက်နီကို ဘာမှာဦးမလဲ... ငှက်
ငှက်... အသက်ဉာဏ်စောင့်သတဲ့... ငှက်
ငှက်... ဘီယာနှစ်ခွက်လောက်ကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ... ငှက်
ငှက်... တင်ဇာမော် ယောက်ျားယူသွားပြီ... ငှက်
ငှက်... မန်ယူကို ၀ယ်ရင်ကောင်းမလား... ငှက်
ငှက်... ဒေါ်မေကြည်ကတော့ စာကောင်းကောင်းမရေးလို့ ... ငှက်
ငှက်... စိတ်ဆိုးတော့မှာပဲ... ငှက်
ငှက်... ဘယ်လိုမှ မအောက်မေ့နဲ့... ငှက်
ငှက်... မော်လမြိုင်မှာ ဆရာကြီး ဒေါက်တာလှဘေ ဆုံးရှာပြီ... ငှက်
ငှက်... ပါရီဟာ အမြဲတမ်း ပါရီပဲ... ငှက်
ငှက်... ဒုက္ခဟာ အမြဲတမ်း ဒုက္ခပဲ... ငှက်
ငှက်... ဆန္ဒရှိရင်... ငှက်
ငှက်... ကောင်းကင်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်... ငှက်
ငှက်... ကံကောင်းရင် မြင်ရလိမ့်မယ်... ငှက်
၁၄.၈.၂၀၀၇၊ ထူးအိမ်သင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၃) နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ
(မူရင်း - ထူးအိမ်သင် ဒေါ့ကွန် )
ကျနော်တို့ ငြင်းပယ်လို့ မရ
စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို မျှော်လင့်လို့
ကျနော်တို့ ထပ်ပြီး လွှင့်တင်လိုက်ကြတယ်။
(မူရင်း - မဇ္ဈိမ )
(မူရင်း - လမ်းအိုလေးဘလော့ဂ်)
(မူရင်း-ဘိုဘိုဘားမားဘလော့ဂ်၊ လမ်းအိုလေးဘလော့ဂ်၊ Freedom Fighter for Burma ဘလော့ဂ်)
သင်္ဘောတွေ အဲဒီမှာ မဆိုက်ကပ်ခဲ့ကြ
ဖွေးခနဲ ဖရဲသီး ထက်ခြမ်းကွဲ
ခြေထောက်ကလေးနဲ့ စည်းလိုက်လို့ပေါ့။ ။
[သိုမဟုတ် ခင်ဝမ်းသို့ တမ်းချင်းများ]
NDD ၀က်ဆိုက်မှာ တင်ထားတဲ့စာအုပ်ဖတ်ဖို့ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
book | No comments |
(မူရင်း- ကဗျာလမ်းသစ် ဘလော့ဂ်၊ လမ်းအိုလေးဘလော့ဂ်)
1st – We want FREEDOM.
We want "Freedom" for our future …
2nd – We want FRIENDSHIP.
We want "Friendship"
betweenOur Army and Our People …
3rd – We want FOOD.
We want "Food" to live peacefully.
About the author – Aung Way (contemporary Myanmar poet), born 1954, became poet 1982,3times in prison – 1976-79, 1988, 1989-91.
လိုချင်တာ ၃ ခု
စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂ဝဝ၇
လိုချင်တာ ၃ ခုပဲ …
တစ် က "လွတ်လပ်ရေး"အားလုံးရဲ့ အနာဂတ်များအတွက် …
နှစ် က "ချစ်ခင်မှု"စစ်တပ် နဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် …
သုံး က "စားစရာ"ဘဝတွေ အားလုံး ငြိမ်းဖို့ …
အောင်ဝေးအကြောင်း - ခေတ်ပြိုင် မြန်မာကဗျာဆရာ၊ ၁၉၅၄ မှာမွေး၊ ၁၉၈၂ မှာ ကဗျာဆရာဖြစ်၊ ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့တဲ့ နှစ်များ - ၁၉၇၆-၇၉၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉-၉၁။
(မိုးမခက မြန်မာလိုပြန်ပေးထားပါတယ်။ မူရင်းကို ထိခိုက်လျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ)
ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (အပိုင်း - ၉) 2008 08 13
တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူရဲ့ရန်သူ မဟုတ်ဘူး၊ တပ်မတော်ကို အသုံးချနေသူများကသာ ပြည်သူရဲ့ ရန်သူဖြစ်တယ် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုခဲ့ပုံတွေကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။
(အသံလွှင့်ဆောင်းပါး နားဆင်ရန် အပြာရောင်ခလုတ်ကို
၃၃ လမ်းမှ ဒေါင်းရင်ပြင်သို့
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈
ဒီနေ့မနက် ငှက်တေးသံတွေကြားမှာ ကျနော် အိပ်ရာက နိုးလာခဲ့တယ်။ မနက်ခင်းလေးမှာ ကျနော် လေညင်းကလေးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ မဲဆောက်မြို့ရဲ့အရုဏ်ဦးဟာ ဖူးငုံစ နှင်းဆီပန်းကလေးလို ရောင်ခြည်နုနုကလေး သောင်ရင်း မြစ်ဒီဘက်ကမ်းကို ကူးလာခါစပါ။
ကျနော် ၀ိညာဉ်ကိုယ်လက် သန့်ကျင်းပြီးပါပြီ။ ကျနော် ဒေါင်းရင်ပြင်အလယ်မှာ မတ်မတ်ရပ်ပြီး နေမင်းကြီးကို ကြိုဆိုဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြီးရင် ရောင်စုံသစ်ခွပန်းဥယျာဉ်ကလေးထဲမှာ ကျနော် ဘ၀ကို လွမ်းအားပိုရပါဦးမယ်။
ညတညဟာ လှပရွှန်းပြက်တဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်သွားတာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ တခါတလေ မဆုံးနိုင်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေ၊ ချောက်အိပ်မက်တွေနဲ့ ညတာရှည်လွန်းတာလည်း ရှိခဲ့သပေါ့။ တခါတခါကျတော့လည်း ပျောက်ဆုံး သွားတဲ့ညကို လိုက်ရှာရင်း မိုးစင်စင် လင်းခဲ့ရပြန်တယ်လေ။ အခုအချိန်မှာ ကျနော် အမှတ်ရဆုံးညတွေကတော့ ပုန်းခို ကျင်းထဲက ညတွေပါပဲ။
စက်တင်ဘာအရေးတော်ပုံကြီး ဖြိုခွဲခံရပြီးစ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ညတွေ ညတွေမှာ တနေရာပြီးတနေရာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ပုန်းအောင်းခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ဟာ မြစ်တစ်မြစ်လိုဆိုရင် နိုင်းမြစ်ကြီးထက်တောင် ရှည်နေပါလိမ့်ဦးမယ်။ စစ်ပွဲ တပွဲလိုဆိုရင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးထက်မက ခက်ထန်ကြမ်းရှနေပါလိမ့်ဦးမယ်။
ပုန်းခိုကျင်းထဲကနေ အပြင်ဘက်က ဘူးစင်ကလေးတခုအပေါ် ကျထင်နေတဲ့ လရောင်ကို ခိုးပြီးကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ညတည ဟာ ကဗျာတပုဒ်တော့ ဖြင့် ကျနော့်ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပြန်ပေးခဲ့ဖူးပါရဲ့။ “စုစုနွေးဖတ်ဖို့ ကဗျာတပုဒ်” ဆိုတာဟာ နအဖ စစ်ခွေးတွေ လိုက်လံချောင်းမြောင်း သတ်ဖြတ်နေတဲ့ကြားက လွတ်ထွက်လာတဲ့ ငွေလရောင်ကလေးက ပေးတဲ့ ကဗျာပေါ့။
ဘူးညွန့်နွယ်ကလေးတွေလေမှာ တလွင့်လွင့်စင်ပေါ်ကို အဆင့်ဆင့် ကြိုးစားတွယ်တက်နေကြတာပေါ့၊ တော်လှန်ရေးကိုငါ မြင်နေရတာပါကွယ်၊ လရောင် ကြယ်ရောင်အောက်ကနေ နေရောင် တောက်ပတဲ့တနေ့ အဲဒီ ဘူးညွန့်စိမ်းစိမ်းကလေးတွေ စင်ပေါ်ကို ကျိန်းသေရောက်မှာပဲ၊ ညီမလေးရယ်တော်လှန်ရေးကို ငါ မြင်နေရပါပေါ့၊ Evolutionary revolution တဲ့ တို့တတွေ ဘူးညွန့်နွယ်လေးတွေလို အဆင့်ဆင့် တော်လှန် ပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီ၊ ဒီတခါတို့ တော်လှန်ပြောင်းလဲဖို့ကတော့ တနှစ်အတွင်း အနိုင်တိုက်ရေး အာဏာသိမ်းပိုက်ရေးပဲ ညီမလေး…။
ဟိုတုန်းကတော့ ကျနော်လွမ်းစရာက ၃၃လမ်းပါ။ အခုတော့ လင်ပစ်မလို စုတ်တီးစုတ်ဖတ် ဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ရယ်။ တခုသော နေရာဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဌာနချုပ်ပါပဲ။
၁၉၈၈ မတိုင်မီက ရွှေကြည်အေးခေတ်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းကျတော့ လေထန်ကုန်းခေတ်။ ခေတ်တွေ ဘယ်လို ပြောင်းပြောင်း ဒီ ၃၃ လမ်းကလေးပေါ်မှာပဲ ကျနော်တို့ကဗျာတွေ၊ ကျနော်တို့စာတွေ၊ မွေးဖွားခဲ့ကြ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာပေါ့။ ၃၃လမ်း ဟာ လမ်းတိုကလေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့စာပေသမားတွေရဲ့ ဒုက္ခကတော့ ရှည်လျားလွန်း လှပါတယ်။ ဒုက္ခကို ရယ်မောပစ်နိုင်တဲ့သူဟာ ယောက်ျားကောင်းလို့ဆိုရင် ကျနော်တို့ကဗျာဆရာတွေဟာ အကုန်လုံး ယောက်ျားကောင်း ယောက်ျားမြတ်တွေ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
ခေတ်ကို ကဗျာနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ၊ စစ်ကို သေနတ်မကိုင်ဘဲ ကလောင်ကိုင်ပြီး တိုက်နေကြတဲ့ ကဗျာ ဆရာတွေ၊ ရှစ်လေးလုံး သမိုင်းသစ် အရေးတော်ပုံကြီးတုန်းကလည်း ဒီနေရာမှာ ဌာနချုပ်ဖွင့်ပြီး ကဗျာဆရာတွေ တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဟော … ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီးမှာလည်း ဒီနေရာ ဒီ ၃၃လမ်း ဒီစခန်းမှာပဲ ဌာနချုပ်ဖွင့်ပြီး ကဗျာဆရာတွေ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာပေါ့။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်ဟာ တော်လှန်တဲ့ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုပဲပေါ့။ ဒီရိုးရာ ဒီယဉ်ကျေးမှုအောက်မှာ ၃၃လမ်းဟာ ခံတပ်တခုလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရဲတိုက်တခုဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။ ဒီခံတပ် ဒီရဲတိုက်ထဲကနေ လွတ်လပ်မှုအတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့ကြသူတွေ၊ တရားမျှတမှုအတွက် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့သူတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒုက္ခကို ခါးစည်း ခံနေရတဲ့သူတွေ။
ဒီမနက်ခင်းမှာ ကျနော် ၃၃လမ်းပေါ်က ကဗျာဆရာ ညီတော် နောင်တော်အပေါင်းကို အထူးပင် သတိရနေပါတယ်။ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ကျနော် ကြံ့ကြံ့တည်တည် ရပ်နေပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်ကို မတ်မတ်ခိုင်အောင် ကျနော် စိုက်ထူ နေပါတယ်။ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံ မလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲ စတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း၊ အလံမလှဲစတမ်း။
အခု ကျနော်ရပ်နေတဲ့မြေကြီးကို ဒေါင်းရင်ပြင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ မဲဆောက်မြို့က ဒေါင်းရင်ပြင်ဟာလည်း လွတ်မြောက် နယ်မြေက ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ဌာနချုပ်ပါပဲ။ ဒေါင်းရင်ပြင်က ကဗျာဆရာအများစုကတော့ သေနတ်ကိုလည်း ကောင်း မွန် ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်ပစ်ခက်တတ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ ကျနော်မလေးစားဘဲ နေလို့မရတဲ့ အချက်ပေါ့။
တိုက်ပွဲဆိုတာ ဘယ်လိုအချိန်၊ ဘယ်လိုနေရာမှာ ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပဲတိုက်တိုက် ဘုံရန်သူကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းသာ အဓိကပဲ မဟုတ်လား။ နအဖ စစ်အုပ်စုကို မမှိတ်မသုန် တိုက်ခိုက်နေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ သေနတ်နဲ့ပဲတိုက်တိုက်၊ ကဗျာနဲ့ပဲ တိုက်တိုက်၊ ဘာနဲ့ပဲ တိုက်တိုက် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပြုတ်ကျသွားဖို့ လိုရင်းပါပဲ။
ကဗျာဆရာဆိုတာလည်း တဦးတယောက်တည်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တပ်မတော်တခုပါပဲ။ A poet is an army of one တဲ့။ ထို့အတူပဲ A poet isarival government တဲ့။ ကဗျာဆရာတယောက်ဟာလည်း စင်ပြိုင်အစိုးရတရပ်ပါပဲ။ ကဲ … ဘယ်လောက် တက်ကြွချိုမြိန်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အဆိုအမိန့်ပါလဲ။
မဲဆောက်မြို့ရဲ့ နံနက်ခင်းဟာ နွေဦး နှင်းမြူတွေနဲ့ လင်းလူနေပါပြီ။ ဟိုးအဝေးက ဘန်ကောက်မြို့တော်ကြီးဘက်ကို မှန်းဆလွမ်းတနေတဲ့ တောင်တန်းရှည်ကြီးတွေပေါ်မှာ နေရောင်တွေ နှင်းနဲ့ ရွှဲစိုလို့ ချမ်းပဲချမ်းနေရော့လေမလား။ ဒေါင်း ရင်ပြင်ပေါ်မှာတော့ နှင်းဝေေ၀တွေက အာဇာနည်တွေရဲ့ သွေးတွေသွေးတွေနဲ့ လိမ်းကျံရောစပ်လို့ ပန်းရောင် ယှက်သန်း နေပါပြီ။
၃၃လမ်းမှာတုန်းကလည်း ကဗျာဆရာတွေဟာ ခေတ်ကြီးကို သယ်ပိုးနိုင်သလောက် ထမ်းပိုးသယ်ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ခေတ်ပြိုင်ခံစားမှု၊ လူထု ရင်ခုန်သံ၊ ပဉ္စမ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် … တော်လှန်သော အနုပညာ။ ဒီဒေါင်းရင်ပြင်မှာလည်း ကဗျာဆရာတွေဟာ ခေတ်ကြီးတခုလုံးကို သယ်ပိုးနိုင်သလောက် ထမ်းပိုးသယ်ဆောင်နေကြပါပြီ။ ဒါဟာ ဆရာဗန်းမော် တင်အောင်ရဲ့ အလိုကျပဲ မဟုတ်လား။
“လူတယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ် တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို သူဘယ်လောက် သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲ”
ဆရာဗန်းမော်တင်အောင် မကွယ်လွန်ခင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးပေါ်မှာ သားတွေကို နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေပဲပေါ့။ ဆရာဗန်းမော် တင်အောင် (၁၉၂၀-၁၉၇၈) ၂၃-၁၀-၇၈ နေ့ ကွယ်လွန်ပါတယ်။
သမိုင်းကို တာဝန်ယူရဲသူတွေအဖို့တော့ ၃၃လမ်းဟာလည်း ၃၃လမ်းသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ သမိုင်းတာဝန် ကျေပွန် လို သူတွေအဖို့တော့ ဒေါင်းရင်ပြင်ဟာလည်း ဒေါင်းရင်ပြင်သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ ၃၃လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါင်းရင်ပြင် ပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အသေ အကြေတိုက်ခိုက်နေတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ တော်လှန်သော အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဘူမိနက်သန်နေရာ မှန်ရင် တနေ့ ဗိုလ်ဝင်ခံရမှာပါပဲ။ အောင်စည်ဆော်လော့၊ ပြည်တော်ဝင်ခန်း ရောက်ချေပြီ။
မဲဆောက်မြို့ရဲ့ နံနက်ခင်းလေးဟာ နေရောင်အောက်မှာ ပိုပြီး အသက်ဝင်လာပါတယ်။ ဘ၀ဟာ ပိုပြီး ခိုင်မာလာပါတယ်။
ဒေါင်းရင်ပြင် ပန်းဥယျာဉ်ကလေးထဲက သစ်ခွပွင့်ရောင်စုံတွေကြားမှာ ကျနော် ရပ်ငေးတွေးသီရင်း လွမ်းနေ မိပါရဲ့။
ချန်ချင်းကို လွမ်းတာပဲလား။ယာမာဂူချီကို လွမ်းတာပဲလား။ယင်အန်းကိုပဲ ငါ ရောက်နေတာလား။ ကျနော် မဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူး။ ။